मिर्गौलाको उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै ल’डि’रहेकी छन् पुष्पा, सहयाेग स्वरूप १ शेयर गरिदिनु होला ! – AB Sansar
मिर्गौलाको उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै ल’डि’रहेकी छन् पुष्पा, सहयाेग स्वरूप १ शेयर गरिदिनु होला !
December 17, 2020 December 17, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on मिर्गौलाको उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै ल’डि’रहेकी छन् पुष्पा, सहयाेग स्वरूप १ शेयर गरिदिनु होला !
२ पुस, काठमाडौं । शिकारीबास खोला नजिकै रहेको सुकुमबासी स्याउली बस्ती । जस्ता र खरले छाएको सानो झुपडी । ५२ वर्षीय एक पुरुष आफ्नी बिरामी छोरीको स्याहारसुसारमा व्यस्त देखिन्छन् । १५ वर्षीय छोरी बिरामी परेपछि दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने मेसो नै उनले भुलिसकेका छन् । जसका कारण उनको घरको चुलोमा नियमित आगो बल्न पनि छाडेको छ । दुवै मिर्गौला फेल भएकी १५ वर्षीया छोरी पुष्पालाई घरभित्रै रुँगेर बस्नुको विकल्प उनीसँग छैन किनभने आर्थिक अवस्था नाजुक छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
पर्साको ठोरी गाउँपालिका–४ स्याउलीबस्ती भएर वीरगञ्ज–ठोरी हुलाकी सडकमा दैनिक थुप्रै गाडीहरु तछाडमछाड गरेर गुडिरहेका हुन्छन् । तर ती गाडीहरुमा बिरामी छोरीलाई राखेर उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्याउने सामर्थ्य उनीसँग छैन, किनभने उनीसँग गाडीभाडा समेत छैन । दुवै मिर्गौला फेल भएका कारण पुष्पाको शरीर सुन्निएको छ । पीडाले पुष्पा छटपटाइरहन्छिन् । तर पनि आफू विवश बनेर हेर्नुको विकल्प नभएको ४ सन्तानका पिता सोमलाल बताउँछन् ।
कच्ची घरभित्र मुढाजस्तै ल’डिरहेकी पुष्पाको अवस्था देखेर सोमलाल आफैँ पनि कहिलेकाहिँ अचेत हुन्छन् । तर पनि आफूलाई सम्हाल्दै उनले छोरीलाई खाना खुवाउने प्रयास गर्छन् । खाना खुवाउनेबित्तिकै छोरीले बान्ता गरेको देख्दा उनी आफैँ सम्हालिन सक्दैनन् । यो जाडो मौसममा घरमा सुत्नका लागि खाटसमेत नभएकाले चिसो भुइँमा नै ओछ्यान लगाएर उनले बिरामी छोरीलाई राखेका छन् । शरीर सु न्निएका कारण पुष्पा आफैँ हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । उठ्नेवित्तिकै चक्कर लाग्ने भएकाले अरुको सहारामा मात्र उठ्न सक्ने सोमलाल बताउँछन् ।
Breaking News: भोली माघ १० गते नेपाल बन्दको घोषणा !
ट्याक्सी ड्राइभर कृष्ण र दीपाकी एक्ली छोरी एलिशा ब्ल’ड क्या’न्सरसँग लड्दै
January 24, 2021 Ab-संसार